Nzọụkwụ site na ntụziaka ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ online | AASraw
/blog/LGD-4033/Nzọụkwụ na-eduzi ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ ntanetị
Ihe na 04 / 24 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na LGD-4033.
Ihe niile banyere LGD-4033 ntụ ntụ
2.What bụ LGD-4033 Powder, CAS No.1165910-22-4?
3. Kedu ka LGD-4033 Powder si arụ ọrụ ❑ LGD-4033 usoro ntụpọ
4.LGD-4033 Powder Research
5.LGD-4033 Nzuzu Ọkara Ndụ
6.LGD-4033 uru ntanetị ❑ Gini ka LGD-4033 Powder Can Benefit You
7.I LGD-4033 Powder Safe?
8.LGD-4033 ntụ ntụ tupu na mgbe
9.Otu esi eji LGD-4033 Powder ❑ LGD-4033 raw Powder Dosing
10.LGD-4033 Ngwunye nke ntụ ntụ
11. LGD-4033 Powder Reviews
12. Ebe Ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ
I. (VK5211 ntụ ntụ) LGD-4033 ntụ ntụ, Ligandrol powdere isi agwa:
aha: LGD-4033 ntụ ntụ
1. Zụrụ LGD-4033 Powder Online
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche zụta LGD-4033 ntụ ntụ online, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị maghị eziokwu ma ọ bụrụ na LGD-4033 raw Powder adabara maka mkpa gị maọbụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ọ ga-adị mkpa iche echiche banyere otu LGD-4033 Powder ga-esi baara gị uru, na ihe LGD-4033 raw Powder mmetụta dị gị mkpa ile anya. Ọ bụ ya mere anyị ji ekenye gị ntụziaka a, yabụ ị nwere ike ịmụta ihe niile ịchọrọ ịchọta LGD-4033 raw Powder, yana ịchọta ma ọ bụrụ na LGD-4033 Powder ga-adị mma maka usoro ọzụzụ gị.
2. Kedu ihe LGD-4033 Powder, CAS No.1165910-22-4?
LGD-4033 Powder, nke a makwaara Ligandrol, VK5211, bụ SARM nke egosiri na ọ nwere mmetụta dị mma na ụlọ mgbochi, nkwonkwo ahụ, inwe mmekọahụ, na ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Ugbua na ule mmadu, Ligandrol egosiputa na o choputara onwe ya maka akwara ike na akuko, nke kachasi anya ileghara oria a na-agba ara ma obu ajuju. Nke a na-eme ka mmetụta mmetụta maka LGD-4033 raw Powder minimal.
AASraw ụlọ ọrụ na-enye ndị na-eme nchọpụta n'ụwa nile na mma LGD-4033 maka ire ere n'ịntanetị (ligandrol ntụ ntụ / VK5211 ntụ ntụ SARMs ntụ ntụ). Nnyocha egosiwo na Ligandrol ntụ ntụ / VK5211 ntụ ntụ, LGD-4033 raw Powder, bụ otu n'ime sarm ike SARM kachasị ike maka ike na nha n'ihi na ọ na-ejikọta aka na ndị na-enweta androgen na-emepụta ihe anabolic na ọkpụkpụ na akwara ya mere ka o jiri ya tụnyere ndị na-arịa ọrịa steroid na-enweghị mmetụta LGD-4033 Powder effects.LGD-4033 Powder egosila na ọ bara uru ọzọ wee testosterone na ndị nwere ọrịa kansa na ọrịa mgbu n'ihi na egosila na enwere mmetụta dị nta nke Ligandrol.LGD-4033 Powder nwere ọtụtụ LGD- 4033 raw Powder benefits besides the strength and muscle recovery increases, ọ na-agba ọsọ usoro ọgwụgwọ ahụ, na egosikwa na ọ belata abụba anụ .LGD-4033 Powder nwere nanị otu akụkụ mmetụta bụ obere nyocha testosterone nke gosipụtara na ikpeazụ ihe dị ka otu izu abụọ ma ọ bụrụ na ojiji.LGD-4033 Ngwadozu ntụ ntụ nwere ike ịdị iche site na obere LGD-4033 raw Powder dosagea iji mee ihe dị ka onye na-egbu egbu ka ọ bụrụ ihe ndị dị elu eji mee ihe dịka onye na-elekọta ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ AASraw na-enye ezigbo àgwà LGD-4033 Powder maka ire ere na ndị nkịkọ:
Aha: LGD-4033 Powder, VK5211, Ligandrol
Ụdị Ụdị Mkpụrụ Ụdị Ụdị Ụdị Ụdị LGD-4033: C14H12F6N2O
LGD-4033 raw Powder Weight Weight: 338.24
LGD-4033 raw ntụpọ ntụ ntụ: 105 - 106 Celsius C
LGD-4033 raw Nzube Nchekwa Temp: RT
LGD-4033 raw Agba ntụ ntụ: Gbanyụọ ọcha Powder Powder
LGD-4033 Nrụpụta ntụ ntụ: www.aasraw.com
LGD-4033 ngwakọ ngwungwu: foil bag ma ọ bụ nhazi, foto ngwugwu dị mgbe ezipụtara
Oge nnyefe: A ga-eziga ngwongwo n'ime 12 awa mgbe ịkwụ ụgwọ
Usoro ịkwụ ụgwọ: WesternUnion, MoneyGram, Bitocin, Nnyefe ego
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ na-achọsi ike ịchọta ma mmegharị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. The LGD-4033 raw Powder bụ ezigbo dị irè ma dị mma testosterone booster na n'ezie na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ site na njide aka na ndị na-anabata androgen. LGD-4033 Powder bụ naanị agbụ na-enye ndị na-anabata etrogen na-enye aka n'ime akwara. Nke a dị iche na ndị ọzọ na-enweta ihe na-emepụta androgen ndị dị n'ọkpụkpụ, abụba, na ụbụrụ. Nke a, nke a na-egosi na nke ahụ ga-enye nsonaazụ dị mma na ngwa ngwa.
Nke a bụ ọdịiche dị ukwuu n'etiti ndị na-arịa ọrịa anabolic (aasraw) na SARMS.
Ọrịa ụbụrụ Anabolic na-abawanye ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-emepụta ọtụtụ inrogen.
SARM na-emewanye ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme nanị na ụfọdụ n'ime anụ ahụ.
Otu n'ime isi nchegbu nke ọtụtụ steroid bụ na ha na-amụba ụba nke Prostate nke nwere ike iduga hyperplasia prostatic bench (BPH).
BPH abụghị ọnọdụ kacha njọ, ma ọ nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na ahụ ike gị.
Ọ bụ ya mere LGD-4033 Powder bụ ihe dị mma na-adọrọ mmasị na steroid.
4. LGD-4033 Powder Research
Enweela otutu nchọpụta banyere ịdị irè nke SARM (SARMS nyocha) ma ntakịrị nnyocha e bipụtara na oge a LGD-4033 Nchọpụta ntụ ntụ.
LGD-4033 raw Powder egosiputa ihe na-achọsi ike na vivo dị irè na ọkpọ ụkwụ na ọkpụkpụ na ụdị anụmanụ nke ọrịa. Enwere naanị otu nnyocha a na-ebipụta na ntụgharị nke LGD-4033 Powder CAS: 1165910-22-4na ụmụ mmadụ nakwa dị ka Usoro Ọhụụ nke Mbụ nke Mbụ.
Ụmụ nwoke 76 (afọ 21-50) natara otu n'ime ọgwụgwọ ndị a:
-0.1mg LGD-4033 ntụ ntụ
-0.3mg LGD-4033 raw ntụ ntụ
-1mg LGD-4033 ntụ ntụ
Mgbe ụbọchị 21 gachara, a na-eji nha, oke abụba, ike, hormone, na ọnụọgụ ahụike ndị ọzọ.
Ndị nabatara LGD-4033 Powder nwetara ụda-adabere (karịa ihe ka mma) na-abawanye na nsị muscle.
LGD-4033 raw Akwụsịghị ntụ ntụ. Enweghị nsogbu ọjọọ ndị metụtara ọgwụ ọjọọ. Ogologo oge nke ihe ojoo yiri ndi di iche iche na ndi ozo. Hemoglobin, antigen kpọmkwem, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, ma ọ bụ oge QT agbanweghị n'ọtụtụ ọgwụ ọ bụla.
LGD-4033 Powder nwere ogologo ndụ na-ekpochapụ ya na ngwakọta dose-ya na otutu nkwụsị.
LGD-4033 raw Nchịkọta ntụ ntụ jikọtara ya na nkwarụ dose-nkwado nke testosterone, hormone-ejide globulin, lipoprotein cholesterol, na triglyceride ọkwa. Mkpuru ihe na-akpali akpali na free testosterone gosiri oke mmechi na 1.0-mg dose nanị. Ọkpụkpụ anụ ahụ na-arịwanye elu na-adabereghị na ya, ma oke abụba agbanwebeghị. Nrịgo elu na lipids laghachiri na ntọala mgbe mgbochi ọgwụgwọ.
LGD-4033 Powder dị mma, enwere profaịlụ pharmacokinetị dị mma, ma gbasaa ọkpụkpụ ozu ya ọbụna n'oge a dị mkpirikpi na-enweghị mgbanwe na antigon kpọmkwem. Ọnwụnwa gafere ogologo oge kwesịrị ịtụle ọrụ dị irè iji melite ọrụ anụ ahụ na ahụike na nhọrọ ndị mmadụ họrọ.
5. LGD-4033 Nzuzu Ọkara Ndụ
LGD-4033 raw Ọkara ndụ ndụ na-adịgide adịgide (24-36 awa), na-adịru ogologo oge ma e jiri ya tụnyere SARM ọzọ (Sarms nnyocha) na ahịa. Ọ dị oke egwu, nke a na-atụ aro LGD-4033 Njikere ntụ ntụ dị ala.
6. LGD-4033 Ndaba uru ❑ Gini ka LGD-4033 Powder Can Benefit You
LGD-4033 Powder bụ ezigbo ike na bara uru nke na-enye ahụ gị ohere dịgasị iche iche. Kedu ihe LGD-4033 raw Powder nwere ike ịbara gị uru? LGD-4033 Powder uru nwere ike ịgụnye:
LGD-4033 Ngwọta Ahụike Nzuzu:
-Aids megide Osteoporosis
Osteoporosis bụ ọnọdụ ebe ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-esiwanye ike n'ihi ụfụ na-efu. Mgbe ị nwetara ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​ga-anọgide na-adịghị ike ma ghara ịrụ ọrụ. Ka ịchọta ngwọta na-adịgide adịgide megide ọnọdụ dị otú a, ihe mgbakwunye elu a dị elu bụ ihe niile ị chọrọ. Nke a bụ n'ihi na androgen nwere mmetụta dị mma na BMD.
Imechi ọkpụkpụ ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ bụ usoro abụọ nke ichedo osteoporosis. Na mgbakwunye na calcium na vitamin D supplementation, bisphosphonates bụ ndị ọrụ dị ma ndị ikom ma ndị inyom.
A na-ejikarị ọgwụgwọ ejiji ndị mmadụ (HRT) mee ihe iji na-emeso mgbaàmà ndị nwokeopausal, ma a naghịzi akwado ya maka ọgwụgwọ ogologo oge, n'ihi mmụba nke ọrịa ara na cancer na-akpata endometrial, ọrịa gallbladder, na thromboembolism.
A ma na etrogens nwere mmetụta dị mma na BMD site na mmụba n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Mkpa ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-egosikwa na osteopenia na ụmụ ụmụ nwanyị AR knockout na-egosi na ndị ikom na-ebute ọgwụgwọ na-emepụta androgen (ADT) maka oge dị ogologo na-ata ahụhụ site na mbelata na BMD.
Ojiji nke SARM maka osteoporosis nwere ike inye abamuru na ma nwoke ma nwanyi, n'ihi na ha enweghi mmetụta ndi ozo nke umuaka nke nwere steroidal androgens. Ihe ọmụmụ 120 na-atụnyere SARM S-4 na ọgwụ dihydrotestosterone (DHT) na nkịta ovariectomized gosipụtara na S-4 nwere ike ịnọgide na-enwe ọkpụkpụ ala na ike ọkpụkpụ na ọkwa nke njikwa na-enweghị njikwa ma gosipụta nrụpụta dị ukwuu karịa DHT.
-Anyocha Cancer Cachexia
A maara cachexia nke ọma n'etiti ndị ọrịa na-arịa ọrịa cancer, ọrịa AIDS, na ọrịa akụrụ n'etiti ndị ọzọ. Site n'iji ike a na-eme ihe, ị ga-enwe ike igbochi ya. Nke a bụ n'ihi na a maara LGD-4033 raw Powder maka ịbawanye ahụ ike ahụ ma mee ka ahụ ike dịkwuo elu. Site na nke a, ọ na-enwe ike belata ohere nke ịmalite ịmalite ịzụlite na ndị dị otú ahụ.
-Emebigara ya Ọrụ arụ ọrụ
A na - ejikarị arụmụka na-adịghị mma nke nwoke na nwanyị na - emekarị ihe dị ala nke hormones nke testosterone, Ị nwere ike ugbu a dozie ọnụọgụ abụọ nke arụmọrụ erectile dika ejaculation akaghi aka site n'inyocha Ligandrol. Nke a bụ n'ihi na ọ ga-eme ka mmepụta hormones testosterone na-emepụta ahụ, nke ga-enwe mmetụ dị mma n'ahụ ndụ gị.
-Abughị Mmeba Adrogenic Ọrụ Na mpaghara
LGD-4033 Powder na-ebuwanye ọrụ androgenic ebe ị chọrọ ka ọ mụbaa (ahụ ike) ma ghara iweli ya ọtụtụ ebe ị na-achọghị ka ọ mụbaa (dị ka prostate).
Edere n'okpuru ebe a na-egosipụta ọrụ androgenic na prostate na anụ ahụ. Ọ bụ Viking Therapeutics, ụlọ ọrụ ahụ nke Ligandrol mere ka ọ bụrụ nke a.
Otu eserese bụ Testosterone. Nke ọzọ bụ LGD 4033 (nke a maara dịka VK-5211, Ligandrol).
Dịka ị pụrụ ịhụ, arụ ọrụ androgenic nke LGD 4033 dị obere karịa prostate karịa anụ ahụ, mgbe Testosterone bụ otu ihe na nke ọ bụla.
LGD-4033 Powder bodybuilding uru
LGD-4033 Powder bụ ọkachamara n'etiti ndị na-eme egwuregwu na ndị ọkachamara ndị ọzọ, gụnyere bodybuilders, powerlifters, ike, ụdị, na crossfitters. Ngwaahịa a na-enyere ndị ọrụ aka ịnweta oke ahụ ike, belata abụba ahụ, nakwa ka ọ dịkwuo ụba ntachi obi na ọnụ ọgụgụ onye ọ bụla. Ligandrol LGD-4033 raw A naghị edozi ntụ ntụ dị ka steroid, ma a machibidoro ya dị ka ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ. Ligandrol dị ike ma e jiri ya tụnyere ihe mgbakwunye na klas ya.
- Ebe a na-agbanye mgbọrọgwụ
Ịchọrọ ị nweta muscle body effortlessly? Ọ dị ugbu a dị nnọọ mfe ịchọta ngwongwo kachasị mma na LGD-4033 a dị ike na androgen. CAS Powder Powder:1165910-22-4. Nke a bụ n'ihi na LGD-4033 Powder ga-enyere ahụ gị aka inwe mmụba mmepụta ume na ịgba ọbara nke na-arụ ọrụ dị ukwuu n'izu ahụ.
-Nke ike ike
Maka LGD-4033 raw Powder iji gbochie ụdị ọkpụkpụ anụ ọ bụla nke nwere ike ibute ọnọdụ nke osteoporosis, ọ na-arụ ọrụ site na iwusi ọkpụkpụ. Nke a ga-ekwe omume n'ihi ike ahụ dị elu. Nke a pụtara na mgbe ị na-eji Ligandrol, ị ga-atụ anya ụdị ọnọdụ ọ bụla na-adịghị ike.
-Anwe Ike Energy
Otu n'ime ọrụ dị mkpa nke mgbakwunye ahụ bụ ime ka ụbụrụ testosterone dịkwuo n'ahụ. Nke a pụtara na ahụ gị ga-enwe ike ịba nnukwu abụba, nke a gbanwere n'ime ike. Enwere ike iji nke a na aru maka ọrụ ndị ọzọ dị ka; respiration na mgbaze.
-Anyere na Ọla Eru
A chọpụtala Ligandrol / LGD-4033 / VK5211 iji rụọ ọrụ dị ukwuu n'ịkwalite usoro nhazi ọnwụ gị. Nke a bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ site n'ime ka ahụ ike dị ike, nke na-egosi na ahụ gị ga-erekwu calorie. Site na nke a, ị ga-eme ka calorie na-efunahụ karịa ka a na-eme ka ha ghọọ ike.
LGD-4033 raw Powder Benefits Other
Ihe ọzọ na - eme ka LGD 4033 bụrụ ihe bara uru bụ na, n'adịghị ka ọtụtụ steroid, ọ bụ okwu ọnụ - enweghị ike .Ọ nwere ike ilo ya karịa ịgbanye.
7. Ọ bụ LGD-4033 Powder Safe?
Imirikiti ndị nabatara androgen na ahịa na-ejikọta na mmetụta dị iche iche. Nke a bụ ihe mere ha anaghịzi akwado. Otú ọ dị, LGD 4033 bụ onye ntanetị nke pụrụ iche, dị irè, na nchekwa dị mma nke na-echekwa dịka a tụrụ anya ya. O nweghi ihe abuba ma abuo na ihe ndi ozo; ya mere ị gaghị enweta ụdị mmetụta ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ahụ kọọrọ mmetụta ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ onye ntanetị kacha mma androgen nke ị nwere ike ịdabere.
8. LGD-4033 ntụ ntụ tupu na mgbe
Tupu ịmalite na-ewere ligandrol / LGD-4033 Powder maka usoro ime ụlọ gị, ọ dị mkpa iji ghọta ihe ị ga-atụ anya na ya. Enwere ọtụtụ uru ị ga-enweta n'oge na-adịghị anya mgbe ị nwụsịrị LGD-4033 Powder. Ọ bụ ezie na ị ga-achọpụta ihe ọ bụla LGD-4033 dị mma nwere ike imepụta ụbụrụ mgbe ụbọchị ole na ole mbụ gasịrị, ị ga-amalite na-eche ezigbo mgbanwe mgbe ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ ma ọ bụ otú ahụ.
Ndị a LGD-4033 raw Powder benefits (LGD-4033 Powder effects) na-abawanye ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ mgbe eji ngwaahịa a. Ịkwụsị ezumike n'oge mmega ahụ gị mgbe ị na-eji mgbakwunye a agaghị ewute ụzọ ụlọ ọrụ a na-emetụta gị.
Anyị na-elegharị anya na interenet, dịka LGD-4033 raw Powder reddit, ebe a bụ ụfọdụ foto banyere LGD-4033 Powder tupu na mgbe.
9. Otu esi eji LGD-4033 Powder ❑ LGD-4033 raw Powder Dosing
Onu ogugu uzuzu LGD-4033 bụ 5-10mg kwa ụbọchị. Ọdịdị LGD-4033 bụ ntụle nke ntụ ntụ ga-akwụsị 6-12weeks. Ngwá ọrụ LGD-4033 Powder nwere ike ịbawanye na nke atọ ma ọ bụ nke anọ LGD-4033 rw Ndabere ntụ ntụ dabere na ogologo oge ị na-eri ya. Site na LGD-4033 raw Powder dosing, ị ga-enweta 5-10 pound nke nnukwu muscle kwa ọnwa. Gwa onye na-enye ndụmọdụ gbasara ahụ ike mgbe niile tupu iji mgbakwunye ọ bụla maka itinye aka n'ime ya.
Ọ bụrụ na ị na-ebuwanye ibu, ọ ga-adị mkpa ka i were LGD-4033 dị oke ụbụrụ ntụ ntụ n'ihi na ọ nwere ike ọ gaghị enye gị nlele LGD-4033 Powder nke ị chọrọ. N'ihe dị elu nke LGD-4033 raw dose ị na-ewere, ka mmetụta LGD-4033 Powder na-emetụ n'ahụ gị nwere ike ịnweta ma ọ dị mkpa icheta na LGD-033 nwere mmetụta dị oke ala nke mmetụta mmetụta ya mere nke a bụ ihe ị na - Ọ dị mkpa ka ị chegbuo onwe gị n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ị na-ewere LGD-4033 raw Powder n'elu ogologo oge, ị gaghị achọ iwere ha ruo ogologo oge karịa 12 izu n'otu oge. A na-akpọ nke a dịka ngwunyere LGD-4033 Powder. N'ezie, mgbe ị gwụchara ngwụrọ LGD-4033 Powder gị ma ọ bụ LGD-4033 raw Akara ntụ ntụ, ị nwere ike idalata ụfọdụ n'ihi na dịka e kwuru n'elu, ahụ gị ga-adaba ụfọdụ glycogen ọ gbakọtara. Nke a abụghị ihe ị ga-echegbu onwe gị ma ọ bụ n'ihi na ị ka ga-enweta otu LGD-4033 raw. Mgbe ịmaliteghachiri LGD-4033 Powder cycle ọzọ, ahụ gị ga-agbakwụnye ya ọzọ ka i wee mara nke a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta ihe na-eme n'ahụ gị.
N'ikpeazụ, ndị mmadụ na-ewere LGD-4033 raw Powder n'ihi na ha chọrọ ịbawanye elu na n'ihi na ha chọkwara idafu oke. O nweghị ihe ọ bụla ị ga-eji mee ihe, ọ ga-eju gị anya na ọ ga-abara gị uru. N'ezie, enwere ụfọdụ ihe ị ga-achọ ichebara echiche mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ steroid nwere ike inye gị mmetụta ndị ọzọ na nke a bụ karịsịa ikpe ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike inye gị ụdị nwoke ma nke a niile bụ n'ihi testosterone ị na steroid n'onwe gị. Mgbe ị na-ewere LGD-4033 raw Powder Otú ọ dị, ị gaghị echegbu onwe gị maka nke a n'ihi na ị nwere ike inweta ike na ntachi obi LGD-4033 raw uru nke ntụ ntụ na-enweghị enwe testosterone.
10. Njirimara nke ntụ ntụ LGD-4033
LGD-4033 / Ligandrol bụ otu n'ime ihe ndị na-adịghị egbu egbu ma ya mere ọ nwere oke mmetụta LGD-4033 Powder. N'ezie, LGD-4033 / ligandrol na-ahọrọ ụdị ọzọ maka steroid maka ndị chọrọ ịba abụba na nnukwu ebe ọ bụ na ndị na-arịa steroid siri nnọọ ike na mmetụta dị ukwuu. Nri ya enweghị mmetụta ọ bụla na imeju mana ọ na-adụ ọdụ ka ị nweta PCT zuru ezu n'ihi na LGD-4033 raw Powder na-ebelata nnọọ karịa SARM ndị ọzọ a ma ama.
Njikwa LGD-4033 / Ligandrol enwere mmetụta ụfọdụ dị nro n'agbanyeghị na ọ bụghị dịka ihe siri ike ma tupu ịzụta ndị ọrụ kwesịrị ịma. Ihe ndị dị otú a gụnyere:
-Suppression nke ọkwa nke Free Testosterone
Ụfọdụ nnyocha na ntụgharị / mmetụta nke ụbụrụ LGD-4033 gosiri na ojiji ya nwere ike ime ka ọ ghara ịdị na-ebelata ihe na-adịghị mma nke testosterone n'efu. Ihe nke a na-apụta bụ ọnụ ala na arụmọrụ. Ma nke a bụ nsogbu nke ga-apụ n'anya mgbe izu ole na ole na-eji ligandrol. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe na-egosi na ọ bụrụ na ị na-eji ligandrol eme ihe mgbe nile.
-Ndị ọkwa nke Globulin
Na-ewe nke LGD-4033 / ligandrol mgbe ụfọdụ na-enwe obere ọkwa nke globulin. Nke a bụ hormone na-enyere aka na-ejikọta homonụ ndị ọzọ. Ozugbo ọkwa ya na-aga ala, enwere ike inwe mmetụta ndị na-adịghị mma nke inwe mmekọahụ bụ ihe ga-ekwe omume. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe na-adịgide adịgide mgbe ọ na-apụ n'anya mgbe izu ole na ole n'iji ligandrol.
Ligandrol ma ọ bụ LGD-4033 Powder reviews bụ nchịkọta ahụike na-ewu ewu mgbe a na-abịa n'ịmepụta ozu ahụ. Ndị a maara dị ka ngalaba SARM, a na-achọpụta mmelite ahụike ahụ iji gosipụta ezigbo uru ahụ ike. LG L 4033 ma ọ bụ Ligandrol rụrụ site na Ligand Pharmaceuticals, site na ebe ọ na-enweta aha ya. Jiri dika ọgwụ na-akpụ akpụ, ọ na-eme ka ọ dị ngwa ngwa.
N'igosiputa mmetụta dị oke mkpa, a na-egosi na ọ ga-enwe nsonaazụ ndị na-ekwe nkwa na ịnweta nsị muscle na nkwụsị elu n'ime oge dị mkpirikpi. Maka ndị na-ahụ maka ahụ ike, SARM a na-enyere aka zuru oke mgbe ị na-emepụta ahụ dị mma n'ọdịnihu.
N'ime ulo ntanetị niile anyị nyochara, ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta bụ AASraw dị mfe (www.aasraw.com). Ụlọ ọrụ AASraw nwere àgwà kacha mma ligandrol ntụ ntụ / LGD-4033 ntụ ntụ na ahịa, na ọtụtụ ndị ọzọ ụdị raw ntụ. Ọ nwekwara ọtụtụ uru ndị ọzọ anyị na-ahụghị mgbe ị na-ezite site na ụlọ ahịa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na mba ụfọdụ, ha ga-ebufe gị LGD-4033 raw Powder n'ime ihe nke ụbọchị, kama izu ole na ole. N'ihi ya, ịnwere ike inweta LGD-4033 Powder (LGD-4033 raw Powder buy) ma ọ bụ ndị ọzọ ụdị raw ntụ ntụ mgbe ịchọrọ ya.
AASraw nwere asambodo nke dị ka n'oge na-adịbeghị anya dị ka afọ a. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere asambodo ndị dị ọtụtụ afọ toro na n'ọnọdụ ụfọdụ, agaghịzi adị na ụlọ ọrụ ahụ.
A haziri asambodo ndị a iji gosipụta na ụlọ ọrụ emeela ihe ndị ọzọ iji hụ na ngwaahịa ha. Ya mere anyị na-ahụ na ụlọ ọrụ AASraw na-eguzo n'elu ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere LGD-4033 raw Powder online.
Enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ. Ma enwere ọtụtụ ebe ịntanetị ebe ị nwere ike ịga ịzụta ihe ndị a. Anyị na-akwado ịzụta LGD-4033 raw ntụ ntụ na ndị ọzọ steroids raw mateiral online, n'ihi na ị nwere ike hụ na ị na-enweta ngwa ngwa na na ego efu.
LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ntụ ntụ Gini mere anyi ji azuta LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder from AASraw? Uru nke iji MK-677 (Ibutamoren) uzuzu maka ozuzu Ọ bụ eziokwu na Modafinil na-enyere ụbụrụ aka na-arụ ọrụ nke ọma Mgbe ọ nwụsịrị?
Tags: ịzụta LGD-4033 ntụ ntụ, zụọ Ligandrol ntụ ntụ, LGD-4033 ntụ ntụ, LGD-4033 uzuzu uzuzu, Ligandrol ntụ ntụ
Ịzụta àgwà dị mma Sarms GW 501516 (Cardarine) ntụ ntụ na weebụ Zụrụ S4 (Andarine) Ngwá ojii Online | Ihe Ị Chọrọ Ịma